2016 - ♥ ♥ MY GREEN LIFE ♥ ♥
Phyu Lwin August 21, 20163Comments
အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာ မပျက်မကွက် စာပြန်ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တာ ဒီနေ့ဆို သုံးပတ်မြောက်ဖြစ်သွားပါပြီ ...။
ဒီနေ့ရေးချင်တာလေးက ကျမ အခုတလော ကြိုးစားပြီး စားဖြစ်နေတဲ့ healthy foods တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ....။
မြန်မာမှာလည်း ဆိုရိုးစကားရှိတယ်မဟုတ်လား..။ "ဝမ်းတစ်လုံးကောင်းလို့ ခေါင်းမခဲဘူး" ဆိုတာလေ..။ ဟုတ်ပါတယ် ..။ စားလိုက်သမျှအစာတွေကို ချေဖျက်နိုင်ပြီး ဝမ်းမှန်မှသာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ တစ်နေ့တာကိုဖြတ်သန်းရတာ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာရှိတယ်မဟုတ်ပါလား....။ အစာကိုပုံမှန်ချေဖျက်နိုင်အောင် အစားအစာကို စနစ်တကျရွေးချယ်စားသောက်တတ်မယ်ဆိုရင် အာဟာရလည်းရှိ၊ မလိုအပ်တဲ့အဆီတွေဗိုက်နားတစ်ဝိုက်စုပုံနေတာမျိုးတွေမရှိတော့ဘဲ ချပ်ရပ်လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ...။ ကောင်းမွန်တဲ့အစာချေဖျက်နိုင်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲဆိုရင်တော့ ကျမတို့ရဲ့အစာအိမ်က စားလိုက်တဲ့အစာကို သေချာချေဖျက်နိုင်မယ်၊ ပြီးတော့ လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကို စုပ်ယူထားနိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်က မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို စွန့်ထုတ်နိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ...။ တကယ်လို့ ကောင်းမွန်စွာ အစာချေဖျက်နိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ waste တွေကို မစွန့်ထုတ်နိုင်ဘဲ အဆီတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားစေပြီး ဝလာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ..။ အဲဒါကြောင့် ခဏခဏတွေ့ဖူးတာက ဝတဲ့သူအများစုဟာ ဝမ်းချုပ်တတ်ပြီး သူတို့စားတဲ့အစာတွေကလည်း ချေဖျက်ဖို့ ခက်တဲ့အစားအသောက်တွေ ဖြစ်နေတတ်တာကြောင့်ပါပဲ ..။ အထူးသဖြင့် အသီးအရွက်၊ သစ်သီးတွေကို ပုံမှန်မစားတာ၊ ရေများများမသောက်တာ၊ တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ အများကြီးစားတတ်တာ၊ အာလူးကြော်လို ဘာဂါလိုမျိုး fast food တွေအစားများတာ၊ အထိုင်များတာနဲ့ အဆီတွေအချိုတွေ အငန်တွေအလွန်အကျွံစားတာမျိုးတွေပေါ့ ...။ (ကျမလည်း အရင်က တော်တော်ဝလာလို့ အခြားသူတွေရဲ့ bodyshaming လုပ်တာကို ခံခဲ့ရဖူးသူပါ။ အခုထိလည်း ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဖို့ ကြိုးစားနေဆဲပါပဲ )။
အခု အစာချေဖျက်မှုကို တိုးမြှင့်ကောင်းမွန်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ အစားအစာ အမျိုးအစား (၅) မျိုးကို ပြောပြပေးပါမယ် ..။ နေ့စဉ်စားသောက်တဲ့အစာမှာ ဒီငါးမျိုးကို ပါအောင်စားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ (၁) သန်မာအားရှိလာမယ်၊ (၂) ချပ်ရပ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းနိုင်မယ်၊ (၃) ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရော အပြင်မှာပါ ပေါ့ပါးကျန်းမာမှုကို ထိထိရောက်ရောက် ခံစားလာရမှာပါ ..။
(၁) Probiotics ပါတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်။ Probiotics ဆိုတာကို Good bacteria လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ် .။ သူတို့က အူလမ်းကြောင်းထဲမှာ အစားအစာတွေ ကောင်းမွန်စွာ ရွေ့လျားနိုင်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ် ..။ Probiotics ပြည့်ဝတဲ့အစားအစာတွေဆိုတာက အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့ (fermented) အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ ကင်မ်ချီ၊ သခွားချဉ်၊ ဒိန်ချဉ်၊ မီဆိုး ၊ သနပ်တွေနဲ့ အလားတူအစားအစာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ...။ မြန်မာမှာလည်း အချဉ်တည်ထားတဲ့အစားအစာတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ..။ အရင်တုန်းကတော့ သဘာဝအတိုင်း အချဉ်ဖောက်တာဆိုတော့ အန္တရာယ်ကင်းတာပေါ့နော် ..။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဆေးတွေသုံးလာကြတယ်လို့ ကြားမိတော့ စိတ်မကောင်းဘူး..။
(၂) Fibres (အမျှင်ဓါတ်) ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေပါ...။ ဒါတွေကတော့ အားလုံးနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားပါနော်..။ အသီးအရွက်အမျိုးမျိုး၊ သစ်သီးအမျိုးမျိုး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ အစေ့အဆံမျိုးမျိုး တို့အပြင် oatmeal၊ whole wheat bread တွေမှာလည်း အမျှင်ဓါတ်အများကြီးပါပါတယ်...။ အစေ့အဆံတွေဆိုရင် ဗီတာမင် E လည်းပါလို့ ဝမ်းကောင်းစေရုံ၊ အာဟာရပြည့်ဝစေရုံမက ဆံပင်သန်စေတယ်၊ နုပျိုစေပါတယ်...။
(၃) ရေဓါတ်များစွာ ပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေပါ..။ သိကြတဲ့အတိုင်း ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓါတ်အချိုးအစားအများကြီးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားလို့ ရေကတော့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ် ..။ အဲဒါအပြင် ရေဓါတ်များစွာပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကို စားသုံးမယ်ဆိုရင် အစာချေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် စားလိုက်တဲ့အစားအစာတွေရဲ့ ရွေ့လျားမှုကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ် ..။ ရေဓါတ် ၉၀%ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ သခွားသီး၊ ဖရဲသီး၊ သံပုရာသီး၊ ရှောက်သီး၊ ကျွဲကောသီး၊ ပန်းသီး၊ ဘယ်ရီသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ မုန်လာဥ အစရှိသည်တို့ကို ပုံမှန်စားသုံးပေးရပါမယ်...။
(၄) Probiotics လိုမျိုးပဲ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ အစားအစာတွေကတော့ Prebiotics တွေပဲဖြစ်ပါတယ်..။ Prebiotics ဆိုတာက အူမကြီးထဲမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ပွားရှင်သန်မှုကို အားပေးတဲ့ အစားအစာမျိုးတွေပါ ...။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အူထဲမှာ Probiotics တွေ ရှင်သန်ကြီးထွားဖို့ လိုအပ်တဲ့အစားအစာတွေကို Prebiotics လို့ ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်..။ ဘယ်လိုအစားအစာတွေလဲဆိုရင် ကညွတ်၊ ငှက်ပျော်သီး၊ သကြားမုန်လာ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲနီလေး အစရှိတဲ့ အစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ...။
(၅) အစာချေဖျက်ရာမှာ အထောက်အကူပေးနိုင်တဲ့ နောက်ထပ် အစားအစာတွေကတော့ သစ်ဥသစ်ဖုနဲ့ ဟင်းခပ်အမွှေးအကြိုင်တွေ (herbs and spices) ပဲဖြစ်ပါတယ် ...။ ချက်ပြုတ်တဲ့အခါ ဟင်းခပ်အမွှေးအကြိုင်တွေကို ထည့်မယ်ဆိုရင် အစားအသောက်ရဲ့ ကယ်လိုရီကို မတက်စေဘဲ အရသာပိုတိုးစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်..။ အဲဒါအပြင် သူတို့က အစားအစာတွေချေဖျက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အစာချေအင်ဇိုင်းတွေကို ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်..။ ပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကတော့ ဂျင်း၊ ပူတီနာရွက်၊ သစ်ဂျပိုး၊ နနွင်း၊ ငရုတ်ကောင်း အစရှိတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်...။
နေ့စဉ်စားသောက်တဲ့အစာမှာ အခုပြောပြပေးတဲ့ အစားအစာတွေကို ပါဝင်စေမယ်ဆိုရင် အာဟာရတန်ဖိုးလည်းတက်သလို အစာချေဖျက်မှုကို အားပေးနိုင်တဲ့အခါ လေထတာ၊ ဗိုက်အဆီစုတာ၊ မအီမသာဖြစ်တာမျိုးတွေ မဖြစ်တော့ဘဲ ခွန်အားတွေတိုးလာမယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းနိုင်မယ်၊ ကျန်းမာသွက်လက်နေမှာ အမှန်ပါပဲ ....။
(အခုတလော nutrition နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ အဖတ်များနေလို့ ကျမဖတ်မှတ်ထားသမျှကို ဘာသာပြန်ပြီး ဝေမျှပေးခြင်းသက်သက်ရယ်ပါ ...)
# Body and Skin care
Labels: Body and Skin care
Phyu Lwin August 14, 2016 1 Comments
အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းဖြစ်တာက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်ကတည်းကပါပဲ ....။ ဒါပေမယ့်လည်း သေချာစနစ်တကျတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ...။ အရင်က ထိန်းသိမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာက Day/night cream, sunscreen လောက်ကို ပုံမှန်လိမ်းဖြစ်တာလောက်ပါပဲ ..။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ Skincare ကို ဝါသနာတစ်ခုလို လုပ်ဖြစ်နေတယ် ...။ ထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့အခါ စိုပြည်လာတဲ့ အသားအရေကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရတာက ပျော်ရွှင်ခြင်းတစ်မျိုးပါ ..။ Makeup Brand တွေထက် Skincare Brand တွေကို ပိုခရေဇီဖြစ်ပါတယ် ...။ မိတ်ကပ်ဆိုတာက လိမ်းနေတုန်းလှဖို့ပဲ အသုံးဝင်တာဖြစ်ပြီး Skincare products တွေကသာ ကိုယ့်ရဲ့ အသားအရေလှပမှုကို ရရှိစေတာမဟုတ်လား..။ အဲဒါကြောင့် မိ်တ်ကပ် ဘာ Brand ဝယ်ချင်တယ်ဆိုတာထက် Skincare ကို စိတ်ချရတဲ့ Brand ကောင်းကောင်းသုံးဖို့ ညီအစ်မတွေကိုရော သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုရော တိုက်တွန်းဖြစ်ပါတယ် ...။
အခုတလော ခရေဇီဖြစ်နေတဲ့ Skincare product တွေကတော့ SK2 ပါပဲ ..။ ဂျပန်မှာတော့ SK2 က လူတိုင်းအကြိုက်တွေ့တဲ့ Brand တစ်ခုပါ ...။ ဈေးကတော့ နည်းနည်းကြီးတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ပြန်ရလာတဲ့ အသားအရေလှပမှုနဲ့ယှဉ်ရင် တော်တော်တန်တဲ့ ဈေးနှုန်းတစ်ခုပါ...။ အခြားတန်ဖိုးပိုနည်းတဲ့တံဆိပ်မျိုးကိုသုံးပြီး အသားအရေလှမလာဘဲ ပိုက်ဆံကုန်တာပဲ အဖတ်တင်မှာထက် SK2 ဝယ်လို့ ကုန်သွားတဲ့ ပိုက်ဆံက တကယ်ကို သုံးပျော်ပါတယ် ...။ ကျမသုံးဖြစ်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေက cleanser ရယ်၊ SK2 clear lotion (သူက toner နဲ့ တူတူပါပဲ)၊ SK2 essence ရယ်၊ RNA power cream ရယ်၊ treatment mask ရယ် သုံးဖြစ်ပါတယ် ...။ မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင် clear lotion, essence, RNA power တို့က အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီး ပျမ်းမျှတစ်သိန်းဝန်းကျင်လောက်တော့ ကုန်ကျပါတယ် ..။ R.N.A ကတော့ ဈေးအကြီးဆုံးပါပဲ။ 50g တစ်ဗူးကို ယန်း ၁၁၀၀၀ ဆိုတော့ မြန်မာငွေတစ်သိန်းလောက်ပေါ့.။ ကျန်တာတွေကတော့ ယန်း ၁၀၀၀၀ အောက်ပါပဲ။ တခါတလေ အချို့ပစ္စည်းတွေက ၃၀% လောက်ဈေးချတတ်ပေမယ့် R.N.A ကတော့ ဘယ်အခါမှ ဈေးချလေ့မရှိပါဘူး...။ review တွေမှာ ရေးလေ့ရှိတာကတော့ R.N.A က အသားအရေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်ထိ ပြန်နုပျိုသွားစေပါသတဲ့ ...။
SK2 ဝယ်မယ်ဆိုရင် ကျမက online ကနေ ဘယ်တော့မှမဝယ်ဘဲ SK2 ဆိုင်တွေမှာသာ ဝယ်လေ့ရှိပါတယ် ...။ Amazon လို site မျိုးကတောင် စိတ်မချရဘဲ ဈေးတွေချထားတတ်ပြီး အတုတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့အကြောင်း amazon က တင်ထားတတ်တဲ့ SK2 products တွေရဲ့အောက်က ကွန်မန့်တွေမှာ တွေ့ရတတ်လို့ပါ ...။ မြန်မာပြန်ရောက်ရင်တော့ ဘယ်လိုဝယ်ရမှန်းမသိသေးပါဘူး..။ မြန်မာမှာ SK2 counter တွေရှိနေပြီလား မသိဘူးနော် ...။ အွန်လိုင်းကနေ ရောင်းတာတွေက သူတို့လည်း အခြားနိုင်ငံက အွန်လိုင်းကနေ မြှာ့ပီး ရောင်းတာပဲဖြစ်မှာကြောင့် ပစ္စည်းစစ်မှန်ဖို့က စိ်တ်ချရမှာ မဟုတ်ပြန်ဘူး...။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာမှာဝယ်လို့မရရင်တော့ နိုင်ငံခြားခရီးတွေသွားဖြစ်ရင် လေဆိပ်က Duty free shops တွေမှာတော့ ဝယ်လို့အဆင်ပြေမှာပါလေ..။
Skincare brand ကောင်းကောင်းသုံးတာထက် အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုမှာ အဓိကအရေးကြီးဆုံးက သန့်ရှင်းမှုရယ်၊ ရေရယ် အစားအသောက်ရယ်ပါ..။ ကိုယ့်ရဲ့ အသားအရေကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်၊ ရေများများသောက်မယ်၊ ငန်လွန်းတာ စပ်လွန်းတာ ချိုလွန်းတာ အဆီများလွန်းတာ စတဲ့ လွန်ကဲတာမျိုးတွေရှောင်ပြီး အာဟာရမျှတအောင် အသား၊ အသီးအရွက်၊ သစ်သီးတွေ ပုံမှန်စားရပါမယ် ...။ ဒါဆိုရင်တော့ အသားအရေစိုပြည်ဖို့ သေချာပါတယ် ...။ မျက်နှာအတွက် အဓိကအရေးကြီးဆုံးက ညမအိပ်ခင် မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးနဲ့ လိမ်းထားတာတွေ သေချာပြန်ဖျက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ...။ ဒါဟာ မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံတွေ အမည်းစက်တွေမဖြစ်ဖို့ အသားအရေကြည်လင်ဖို့ အရေးကြီးဆုံး လုပ်ရမယ့်အချက်ပါ ..။ မျက်နှာကို သေချာမသန့်ရှင်းရင်တော့ ဘယ်လိုကောင်းတဲ့ တံဆိပ်မျိုးပဲသုံးပါစေ အသားအရေကတော့ ထူးခြားလာမှာမဟုတ်ပါဘူး..။ အဲဒါကြောင့် ဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အသားအရေလှချင်တယ်လို့ပြောသူတိုင်းကို ရေများများသောက်ဖို့၊ သစ်သီးသစ်ရွက်များများစားဖို့၊ မျက်နှာကို မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးနဲ့သေချာသန့်ရှင်းဖို့ အမြဲပြောဖြစ်လေ့ရှိပါတယ် ..။ြ့ပီးတော့ sunscreen ကို အမြဲတမ်းလိမ်းဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ် ..။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေက အသားအရေကို အိုမင်းစေတယ်၊ မည်းသွားစေရုံသာမဘဲ တင်းတိပ်အမည်းစက်တွေဖြစ်စေသလို အရေပြားကင်ဆာတောင် ဖြစ်စေနိုင်တော့ ကြိုတင်ကာကွယ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ..။ ဂျပန်ရဲ့နွေရာသီက ပူပြင်းလွန်းလို့ SPF 35 လောက်ကို အနည်းဆုံးသုံးဖြစ်ပါတယ် ..။ cream type ထက် Gel type က ပူတဲ့ရာသီနဲ့ပိုကိုက်တာမို့ Gel type ကို သုံးတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ် ...။
ကျမရဲ့အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့နည်းကတော့ ဒီလိုပါ...။ မနက်နိုးရင် ရေအဝသောက်ပါတယ်..။ ပြီးရင် မနက်စာစား ရေချိုးပြီးတဲ့အခါ မျက်နှာကို clear lotion, essence, rna power cream လိမ်းပါတယ်..။ လက်တွေခြေတွေကိုလည်း lotion တစ်ခု အမြဲလိမ်းပါတယ် ..။ ပြီးရင်တော့ မျက်နှာရော ခြေတွေလက်တွေကိုရော sunscreen လိမ်းပါတယ်..။ ပြီးမှ မိတ်ကပ်ပါးပါးလိမ်း ဘာဘာညာညာ ခြယ်သပါတယ် ..။ sunscreen ကိုတော့ နေ့လည်ပိုင်းမှာ ၂ ခါလောက်ပြန်လိမ်းဖြစ်ပါတယ် ...။ ညဘက်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ မိတ်ကပ်ကို ဖျက်ဆေးနဲ့ သေချာဖျက်ပါတယ်..။ ရေချိုးပြီးတဲ့အခါ မနက်ကလိုပဲ sunscreen ကလွဲရင် အားလုံးကို လိမ်းပါတယ်..။ ညဘက်မှာတော့ eye cream လည်း လိမ်းပါတယ် ...။ lip balm ကတော့ နှုတ်ခမ်းမကွဲအောင် အမြဲဆိုးလေ့ရှိပါတယ်...။
အခုနောက်ပိုင်း မြန်မာမှာ Online shopping တွေ ခေတ်စားလာတာတွေ့ရတယ် ..။ ဘယ်က ထုတ်မှန်းမသိတဲ့ Brand တွေ အသားဖြူဆေးဆိုတာမျိုးတွေကို ရောင်းလာကြတာတွေလည်း တွေ့ရတယ် ...။ မြန်မာက ညီမတွေ တူမတွေကို အဲလိုမျိုးတွေ ဘယ်တော့မှ မဝယ်ဖို့ အမြဲမှာရတယ်..။ အဓိကက သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေဖို့၊ ရေများများသောက်ဖို့၊ အစားအစာကို စနစ်တကျစားသောက်ဖို့ ပြောပြပြီး skincare brand တွေဆိုရင်လည်း ဆိုင်တွေမှာ သေချာခင်းကျင်းရောင်းချတဲ့ လူသိများတဲ့ ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့တံဆိပ်တွေကိုပဲ သုံးဖို့ အမြဲမှာနေရပါတယ် ...။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အသားဖြူတာမည်းတာထက် အသားအရည် ကြည်လင်ရှင်းသန့်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်နေရတာလည်း ရှင်းသန့်နေပြီး မြင်ရသူလည်း စိတ်ချမ်းသာတာမို့ ကျမကတော့ မိတ်ကပ်တွေ ထူပျစ်နေအောင် လိမ်းထားတဲ့ပုံစံထက် ကြည်လင်ရှင်းသန့်နေတဲ့ ပုံစံလေးတွေကိုသာ မြတ်နိုးမိသူပါ...။
Phyu Lwin August 07, 20162Comments
Long time no post here :D :D
စာမရေးဖြစ်တာ တော်တော်ကြာနေခဲ့ပြီ ...။ ဘာမှတော့ မရေးဖြစ်ပေမယ့် ဒီနေရာလေးကိုတော့ အမြဲလိုလို လာကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ...။ လာတိုင်းလည်း အမြဲလို လာကြည့်နေသူတွေ ရှိနေသေးတဲ့ ဒီနေရာလေးအတွက် အသစ်တွေ မဖန်တီးဖြစ်တိုင်း တာဝန်မကျေသလို ခံစားရတယ် ..။
ဂျပန်မှာ နေလာခဲ့တာ အခုဆိုရင် ၂ နှစ်ပြည့်တော့မယ် ...။ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာဆိုရင်တော့ ကျောင်းပြီးပြီမို့ မြန်မာပြည်ကို အပြီးပြန်ရတော့မယ် <3 <3 ဒီကြားထဲမှာတော့ သုတေသနအတွက် တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်တော့ ပြန်ဖြစ်ပါတယ် ..။ အခု ဒီမှာ တကယ့်ကို နွေရာသီရဲ့ အပူဆုံးကာလ ရောက်နေပါပြီ။ တစ်နှစ်လုံးမှာ အပူဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့ August လမှာတော့ အပူချိန်က ၃၇-၃၈ ဒီဂရီလောက်ထိ ပူပြင်းလေ့ရှိပါတယ် ...။ နွေအပူကို အံတုဖို့ ဦးထုပ်၊ နေကာမျက်မှန်၊ ထီး၊ sunscreen ၊ skincare၊ အစားအသောက် စသဖြင့် အားလုံးကိုတော့ သေချာပြင်ဆင်ထားရပါတယ် ...။
၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲမှာ ကျမရဲ့အကြိုက်တွေ ပြောင်းလဲလာရုံသာမက အတွေးအခေါ်တွေ၊ အနေအထိုင်တွေလည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့သလို ခံစားရတယ် ..။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုလည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ် ..။ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ အများအားဖြင့် အသက်ရှည်ကျန်းမာကြတယ် ...။ အသက်ကြီးတဲ့အထိ ကျန်းမာနုပျိုနေအောင် ဂရုတစိုက်ထိန်းသိမ်းနေထိုင်ကြတယ် ..။ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်ကို အမြဲဂရုပြုပြီး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်အောင် ထိန်းညှိနေထိုင်ကြတာကြောင့် အဆီမရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ သွက်လက်ချက်ချာနေကြတာများပါတယ် ..။ အနည်းစုကတော့ ချွင်းချက်ရှိတာပေါ့လေ..။ ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့်ကတော့ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို သေချာဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်သူများပါတယ် ..။
အရင်တကည်းက လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်လေ့ရှိပေမယ့် မနက်အိပ်ရာနိုးကာစ အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်း ၇ မိနစ်လောက်သာ လုပ်တတ်တာပါ ..။ ဒါကလည်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလည်းမရှိဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထင်မိအောင် ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် နှစ်သိမ့်မိတဲ့သဘောလဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် ...။ ၂၀၁၆ နှစ်စကတည်းက ကျောင်းစာတွေလုပ်ရင်း စဉ်းစားရတာတွေများလာတဲ့အခါ ဘာမှသိပ်မတွေးတော့ဘဲ အစားအသောက်ကို သိပ်ဂရုမစိုက်ဘဲ စားဖြစ်ခဲ့တယ် ...။ လေ့ကျင့်ခန်းကလည်း ထုံးစံအတိုင်း မနက်ခင်း ခဏလေးဘဲလုပ်တာကြောင့် အချိန်နဲ့အမျှ စားလာတာတွေက အစွမ်းပြပြီး ကိုယ်အလေးချိန်တွေ တက်လာတာပါပဲ ..။ ဘယ်လောက်အထိလည်းဆိုရင် ၅ ကီလိုလောက် တိုးလာခဲ့တယ် ...။ အဲဒါကြောင့် အခုတော့ တစ်ရက်ကို ၃၀ မိနစ်လောက်အထိ heavy workouts လုပ်နေရတယ် ...။ Gym ကိုတော့ မသွားဖြစ်ပေမယ့် တကယ်က အဲဒီမှာ သေချာကစားမှ အဆီတွေကျပြီး ကြွက်သားတွေ တင်းရင်းလာမှာဆိုတာ သိပေမယ့်လည်း youtube က Tutorial တွေပဲ ကြည့်ပြီး အိမ်မှာပဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ကျလာအောင် ကြိုးစားနေတာ အခုတော့ ၁ ကီလိုလောက်ကျသွားပါပြီ ....။ တကယ်က အရိုးတွေပဲမြင်ရပြီး ကောက်ကြောင်းတွေမရှိတဲ့ပိန်တာမျိုးကိုမကြိုက်ဘဲ အဆီမရှိဘဲ ကျစ်လျစ်နေတဲ့ သူ့နေရာနဲ့သူ ကြွက်သားတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မျိုး (ခေတ်အခေါ်ဆိုရင်တော့ ကိတ်တာပေါ့လေ :D) ကို လိုချင်တာဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ mission က ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ဖို့...။ အခုကစားဖြစ်နေတဲ့ workout က အောက်က full body workout ပါ
အဲဒါအပြင် အစားအသောက်ကိုလည်း items တွေပြောင်းပစ်လိုက်ပြီး healthy food တွေကိုပဲ ရွေးစားဖြစ်ပါတယ် ...။ ကျမက အဲဒီလိုစားတော့ အခြားသူတွေက diet လုပ်တယ်လို့ ထင်ကြပြီး ဘယ်လိုဘယ်ညာဆိုတာမျိုး လာပြောတတ်ကြတဲ့အခါ I'm not on diet, I just changed my eating style from having unhealthy to healthy meals လို့ အထပ်အထပ်အခါခါ ပြန်ပြောနေရပါတယ် ..။ ပိန်စေဖို့ အစားလျှော့စားတာက နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုမှ မဟုတ်တာ။ ကိုယ့် နေ့စဉ်သွားလာလုပ်ကိုင်ဖို့ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက် အစားအသောက်ကလည်း အဓိက အရေးကြီးဆုံးပဲ မဟုတ်လား..။
အရင်က ready made ထမင်းဗူးတွေလည်း အမြဲလိုလိုစားဖြစ်သလို ဆိုင်တွေမှာလည်း ခဏတိုင်းသွားစားဖြစ်တယ် ...။ အာလူးကြော်၊ ကိတ်၊ cheese လိုမျိုး အဆီတက်မယ့် အစားအသောက်တွေလည်း ခဏတိုင်းစားတာပဲ ...။ ငယ်ရွယ်တုန်းတော့ အဝမမြန်တတ်ပေမယ့် အသက်ရလာရင် ဝလွယ်လာတယ်ဆိုတာ မေ့ပြီးစားမိတော့ အသက်က စကားပြောလာတဲ့အခါ မထင်မှတ်ဘဲ ဝလာတာပါပဲ ...။
အခုတော့ အစားအသောက်ကို ကိုယ့်ဘာသာ အချိန်ယူပြင်ဆင်ဖြစ်တယ် ...။ တစ်ရက်ကို အရင်ကတော့ ၃ နပ်လောက်ပဲ စားရာကနေ အခုတော့ နည်းနည်းနဲ့ ၆ ခါလောက် စားဖြစ်ပါတယ် ..။ မနက်ဖြန်အတွက် ဒီနေ့ညကတည်းက နေ့လည်စာနဲ့ ညစာကို ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားတယ် ...။ မနက်ခင်းနိုးပြီးဆိုရင် ရေသောက် ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီးတာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ် .။ ပြီးရင် မနက်စာကို oatmeal (no added sugar) နဲ့ နွားနို့ (low fat milk) ကိုပြင်ဆင်ပြီး စားတတ်သလို whole wheat bread ကို ကြက်ဥရယ် ထောပတ်သီးရယ်ကို mayonnaise အဖြစ်သုံးပြီး ဆလတ်ရွက်ညှပ်ပြီးလုပ်တဲ့ sandwich နဲ့ နွားနို့တစ်ခွက်သောက်တဲ့ မနက်စာလည်း စားလေ့ရှိပါတယ် ..။ အရင်ကတော့ တွေ့ကရာ ပေါင်မုန့်ဖြူတစ်မျိုးမျိုး၊ ကိတ်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကမန်းကတမ်းသောက်စားတဲ့ မနက်စာကနေ အခုတော့ သေချာပြင်ဆင်ပြီး fiber တွေလည်း အများကြီးပါအောင် အာဟာရတန်ဖိုးလည်း တက်အောင် အစားအသောက်ပုံစံကို ပြောင်းစားဖြစ်တာပါ။
နေ့လည်စာနဲ့ ညစာမှာတော့ ထမင်းကို လုံးဝရှောင်လိုက်ပါတယ် ..။ ဒီက ဆန်တွေက ဆန်စီးတွေဆိုတော့ အဆီတက်ပြီး ဝစေတဲ့အဓိက အစားအစာမို့လို့ ထမင်းကို ရှောင်စားတာဖြစ်ပါတယ် ..။ စားဖြစ်တာတွေက ဆီနည်းနည်း အငန်နည်းနည်းနဲ့ ချက်၊ ပြုတ်၊ သုပ် စားဖြစ်တဲ့ ငါး၊ ကြက်သားနဲ့ အသီးအရွက်၊ ပဲပြား၊ တို့ဖူး၊ ကင်မ်ချီ၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ကြာဇံတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ....။ အဓိကက အဆီလျှော့ချရမယ်၊ အသီးအရွက်များများပါရမယ်၊ အာဟာရပြည့်ဝရမယ်ပါပဲ။ နေ့လည်ပိုင်း Snacks အနေနဲ့က almond စေ့လိုမျိုး အစေ့အဆန်တွေစားဖြစ်ပါတယ် ..။ ညရောက်ရင်တော့ အသီးနဲ့ ဒိန်ချဉ်စားဖြစ်ပါတယ် ...။ ဒီညအတွက်တော့ ဒီမှာစာရေးနေလို့ ဟင်းမချက်ရသေးပါဘူး...။
ဒါကတော့ အခုည စာရေးရင်း စားနေတဲ့ ဒိန်ချဉ်နဲ့ ဖရဲသီး..။ မနက်ဖြန်အတွက်က salmon ငါးကို ကြော်မယ်။ အရွက်နဲ့ ပဲပြားရယ် ခေါက်ဆွဲရယ်ကြော်ပါမယ် ..။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာတော့ အားလုံးရှိနေပြီးသားဆိုတော့ ခဏနေမှ ခေါက်ဆွဲကြော်မယ် ။ ငါးကိုတော့ ပဲငံပြာရည်ရယ်၊ ရှာလကာရည်နည်းနည်းရယ်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ရယ်ဖြူးထားနှပ်ထားပြီး မနက်မှ ဒယ်အိုးထဲ သံလွင်ဆီနည်းနည်းထည့် ငါးထည့်ပြီး နည်းနည်းလေးအပူပေးရုံနဲ့ ကျက်ပါတယ် ...။
လေ့ကျင့်ခန်း၊ အစားအစာပြီးတော့ ရေသောက်တာနဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာတဲ့ကိစ္စပါ ..။ ကျောင်းနဲ့ အိမ်နဲ့က စက်ဘီးနဲ့ဆိုရင် ၁၀ မိနစ်လောက်ပဲသွားရပေမယ့် လမ်းလျှောက်ရင်တော့ ၂၅ မိနစ်လောက်ကြာပါတယ် ...။ မနက်အစောထပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်တာကြောင့် အခုဆိုရင် ကျောင်းကို လမ်းလျှောက်သွားပါတယ်..။ ကျမရဲ့အခန်းက ၄ ထပ်မှာဆိုတော့ အရင်ကဆိုရင် ဓါတ်လှေကားနဲ့တက်နေကျပေမယ့် အခုတော့ ရိုးရိုးလှေကားကနေပဲ တက်ပါတယ် ...။ ရေက တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၃ လီတာလောက် သောက်ဖြစ်ပါတယ် .။ အရင်ကတော့ ကျောင်းရောက်ရင် အခန်းထဲစာလုပ်နေရင်းနဲ့ ရေလဲသိပ်မသောက်ဖြစ်တော့ စားပွဲမှာပဲ အကြာကြီးထိုင်သလိုဖြစ်လို့ ဗိုက်အဆီစုတာ ပိုများတာဖြစ်ပါတယ် ..။ အခုတော့ ရေခဏခဏသောက်တော့ toilet ခဏခဏသွားရလို့ ခါးနာတာ အညောင်းမိတာလဲ သက်သာသွားပါတယ် ..။
ဒါတွေကတော့ လောလောဆယ် ကျမဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်း စကားစမြည်ပြောရင်းနဲ့ ဘလော့ဂ်လေးကို ပြန်လှုပ်နှိုးဖြစ်တာပါ ...။ စာရေးလက်စရှိရင် ရေးဖြစ်တာကြောင့် နောက်နေ့တွေတော့ စားဖြစ် ပြင်ဆင်ဖြစ်တဲ့ healthy food တွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ထားပြီး ဝေမျှချင်ပါသေးတယ် ..။ ဒီနေ့က မရည်ရွယ်ဘဲ စာရေးဖြစ်သွားတာကြောင့် ဘာမှ ပြင်ဆင်မှုမရှိခဲ့လို့ပါ ...။
Thank you so much for coming here <3 <3 <3
# Body and Skin care # Days In Japan
Labels: Body and Skin care, Days In Japan, Food, Sharing
Spring is coming ~~~
Phyu Lwin March 27, 20163Comments
ရာသီတွေ တပတ်လည်လာလိုက်တာ အခုတော့ နွေဦးကို ပြန်ရောက်လို့ လာပြန်ပါပြီ ....။
ရာသီအလိုက် ပွင့်လေ့ရှိတဲ့ပန်းတွေကို မှတ်တမ်းတင်လေ့ရှိတဲ့ကိုယ့်အတွက်တော့ နွေဦးဟာ ပန်းရောင်စုံနဲ့ လှပစွာ ရောက်ရှိလို့လာပါတယ် .....။
မတ်လဆန်းပိုင်းထဲမှာတော့ Plum Flowers တွေဖြစ်တဲ့ ဂျပန်လို Ume လို့ခေါ်တဲ့ ချယ်ရီပန်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပန်းတွေ ပွင့်နေပါပြီ ..။ ချယ်ရီနဲ့ မတူတာက Ume Flower က ပွင့်ဖတ်အလွှာပိုများပြီး အနံ့မွှေးပါတယ် ....။
နွေဦးရောက်လာရင် ထုံးစံအတိုင်း ကင်မရာတစ်လုံးကိုင်လို့ လျှောက်သွားကာ ပန်းပင် ပန်းပွင့်မျိုးစုံ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အကျင့်က ခုထိ ရှိနေတုန်းပါပဲ...။
ဒါကတော့ ခုမှ ပွင့်စပြုလာပြီဖြစ်တဲ့ ချယ်ရီတွေ
ဒီပန်းက Magnolia လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးနွယ်ထဲက ပန်းအဖြူရောင်။ မြန်မာလိုတော့ တတိုင်းမွှေးလို့ခေါ်သတဲ့။ ပန်းပွင့်တွေက အကြီးကြီးတွေ အရမ်းလှပါတယ်။။။
ဒီပန်းက မြန်မာလိုတော့ နှင်းပန်းလို့ခေါ်တဲ့ အဖြူရောင် ပန်းငိုက်စိုက်ကလေးတွေ ..။
Daffodils ပန်းဝါဝါတွေ မြင်လိုက်ရပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ နွေဦးဟာ ပြီးပြည့်စုံသွားသလို နွေဦးမှာ ကိုယ်အမြင်ချင်ဆုံးပန်းက Daffodils တွေ ဖြစ်နေခဲ့တာကိုးးး။
# Days In Japan # Flowers
Labels: Days In Japan, Flowers
စွန်ကလေးရေ ... ပျော်ပါစေ ~~~ (၂)
Phyu Lwin February 12, 20162Comments
၂ နှစ်ဆိုသည့်ကာလတွင်း နေ့စဉ်ရက်ဆက် အီးမေးလ်တွေ မပြတ်ပို့ခဲ့သော်လည်း စာတွေလေ့လာနေရလို့ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် သူမဆီကတော့ ရံဖန်ရံခါသာ စာတွေပြန်ရရှိခဲ့ပါသည်။ Chat box ကနေ အပြန်အလှန်စာများရိုက်ကာ စကားတွေပြောဖို့ဆိုသည်ကလည်း သူ့မှာလည်း အလုပ်နှင့်၊ သူမမှာလည်း ကျောင်းတစ်ဖက်နှင့် ဖြစ်သည့်အခါ နှစ်ယောက်တူတူဆုံချိန်ဆိုသည်မှာ ရှားပါးလွန်းလှပါသည်.။ မျက်နှာမြင်လို့ရသည့် Video call များနှင့် စကားပြောရင်း သူမမျက်နှာလေးကို မြင်ခွင့်ရရန်ကလည်း အင်တာနက်လိုင်းများက သူ့ကို အခွင့်အရေးမပေးတတ်ပြန်ပေ.။ သည်လိုနှင့်ပင် တခါတရံသာ ဓါတ်ပုံတချို့တင်တတ်သည့် သူမ၏ Facebook မှ တစ်ဆင့်သာ သူမရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှု တချို့တလေကို သူသိမြင်ခွင့်ရခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်.။ ထိုကာလများသည် သာမာန်ဖြတ်သန်းနေမိသည့်အချိန်များသာ ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုပါက ဘာသိဘာသာ တိုတောင်းနိုင်သော်လည်း မျှော်လင့်ချက်နှင့် စောင့်မျှော်နေရသည့် လူနှစ်ယောက်အတွက်တော့ ရှည်လျားလွန်းသည့် ကာလများ ဖြစ်နေတတ်သည်မှာ ထုံးစံတစ်ခုပင်ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလား.။
“ငါ နောက်ထပ် ၂ နှစ်လောက် ဆက်နေဖြစ်လိမ့်မယ်..။ ငါဘွဲ့ရခဲ့တဲ့ ဌာနကနေ သုတေသနလက်ထောက် (Research Assistant) လုပ်ဖို့ တောင်းဆိုတယ်..။ ၂ နှစ်လောက် အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ နောက်ထပ်တက်မယ့် ပါရဂူဘွဲ့အတွက် သုတေသနကို တခါတည်း လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ဘွဲ့ဆက်တက်ဖို့ ပိုလွယ်ကူသွားပြီ...။ ငါ့ကို ခွင့်ပြုရမယ်နော်”
နောက်ထပ် ၂ နှစ်...။ ကုန်ဆုံးခဲ့သည့် ၂ နှစ်ဆိုတာကိုတောင် အလွမ်းတွေကြားထဲ သေလုမျောပါး စောင့်မျှော်နေခဲ့ရာက သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်က နီးစပ်လာချိန်မှာမှ နောက်ထပ်စောင့်ဆိုင်းရမည့်အချိန်ကို ထပ်ပိုင်ဆိုင်ရမှာတဲ့လား...။
“သာမာန်ထက် နည်းနည်းသာတဲ့ ဘွဲ့တစ်ခု၊ ရာထူးတစ်ခုကြောင့် နင့်အနားကို ပျားပိတုန်းတွေ ရစ်ဝဲနေမှာပဲ ..။ ရှောင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပေါ့..။ တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လည်း ဒါတွေက နင့်ရဲ့ သစ္စာတရားကို စစ်ဆေးတဲ့စာမေးပွဲတွေလိုပါပဲ..။ နင် စာမေးပွဲပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ” ဟု သူမက စိုးရိမ်ပူပန်သည့် လေသံနှင့်အတူ သတိပေးဖော်ရပါသေးသည်..။ တကယ်ဆိုလျှင် သူ့ရဲ့စိတ်ဝိဉာဉ်အားလုံး၊ ခံစားချက်အားလုံးက သူမဆီမှာ ရောက်နှင့်နေပြီးဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ ကျန်နေခဲ့သည့် သူမစိတ်နှင့် သူ့ကိုယ်ကိုတော့ စိတ်ချတန်ကောင်းရဲ့ မဟုတ်ပါလား...။
လောကဓံဆိုသည်က ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ဖန်တီးတာမဟုတ်ဘဲ အကြောင်းတစ်စုံတရာကြောင့် သူ့အလိုလို ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကံအကြောင်းတရားဟုဆိုရလျှင် သူ့ဘဝရဲ့ အပြောင်းအလဲတချို့ကို ကံတရားပေါ်ကိုပဲ ပုံချမည်ဆိုပါက တရားပါ့မလား ဝေခွဲမရပါ ..။ သို့သော်လည်း အပြောင်းအလဲဆိုသည့်အရာတစ်ခုက ထင်မှတ်မထားသည့်အချိန်တွင် သူ့ဘဝထဲကို ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာသောအခါ အမြဲတမ်းလွမ်းနေခဲ့ရဖူးသည့် သူမရဲ့သွင်ပြင်ကို လုံးဝမေ့ပစ်လိုက်ပြီလားဆိုသည့်မေးခွန်းကိုတော့ သူ မဖြေလိုတော့ပေ....။ သူမ တချိန်က သတိပေးခဲ့ဖူးသလို သူရဲ့သစ္စာမပျက်ယွင်းဘဲ တည်ကြည်လေးနက်မှုကို စမ်းသပ်သည့် အဖြစ်အပျက်ပေါင်းမြောက်မြားစွာကို သူကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်မှာ အကြိမ်ကြိမ်ပင်ဖြစ်ပါသည်...။ အကြိမ်တိုင်း၌ သူမကို လွမ်းသည့်စိတ်၊ ချစ်သည့်စိတ်၊ မြတ်နိုးသည့်စိတ်အရင်းခံတို့ကြောင့်ပင် သူ့ရဲ့သစ္စာတရားက ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်မသွားခဲ့ခြင်းကို သူမနှင့်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး၏ ပတ်ဝန်းကျင်က အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်ပဲ မဟုတ်လား ....။
“အလွန်အကျွံသနားတတ်တဲ့စိတ်၊ လူတိုင်းကို ကိုယ့်စိတ်လိုမျိုးသဘောထားပြီး ယုံမှတ်ပေါင်းသင်းတတ်တဲ့စိတ်တွေကို နည်းနည်းလောက်လျှော့သင့်တယ်ကွာ” ဟု သူငယ်ချင်းများက သတိအတန်တန်ပေးခဲ့သော်လည်း စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းခြင်းသည် သူ့ဘဝကို အကျိုးယုတ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသာ သူက ယုံကြည်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လူတိုင်းကို ကိုယ့်လိုမတွေးနဲ့ ဟု သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများ၊ မိဘ၊ မောင်နှမများက စိုးရိမ်ပူပန်စွာ ပြောဆိုတတ်ကြသော်လည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက အမြစ်တွယ်လာခဲ့သော သနားငဲ့ညှာတတ်သည့်စိတ်သည် တချိန်ချိန်တွင် သူနှင့်သူမကို ဘဝတစ်ခုစီခြားစေခဲ့ပါလားဆိုသည့်အဖြစ်အပျက်ကို နောင်တနှင့်အတူ ရရှိလာခဲ့ချိန်တွင်မတော့ အရာရာအားလုံး နောက်ကျသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်...။
“ဒါတွေအားလုံးက မင်းမှားလို့ဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူး...။ မင်းကောင်မလေးက သွေးအေးလွန်းလို့၊ သူ့ဘဝတက်လမ်းကိုပဲ ကြည့်ပြီး မင်းတို့ကြားမှာရှိတဲ့အချစ်နဲ့ သံယောဇဉ်ကို ဦးစားမပေးလို့။ အဲဒါကြောင့် သူ့ထက်လှတဲ့ သူ့ထက်ယုယကြင်နာတတ်တဲ့၊ သဘောမနောကောင်း၊ အပြောကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က မင်းဘဝထဲ ဝင်လာတာ။ မင်းရှောင်တိမ်းချိန် မရလောက်အောင် အဖြစ်အပျက်တွေကလည်း မြန်ဆန်လွန်းတယ်၊ လှည့်ကွက်တွေလည်း များလှတယ်မဟုတ်လား။ အခုတော့ ဘဝက မင်းတို့နှစ်ယောက် ထင်ထားသလောက် မရိုးရှင်းဘူးဆိုတာ သိလာကြပြီလား..။ တကယ်ဆို နှစ်ယောက်တစ်ဘဝဖြစ်ဖို့ အရင်ကြိုးစားပြီးမှ ကောင်မလေးက သူ့ပညာရေး၊ သူ့ဘဝတက်တမ်းအတွက် ဆက်ကြိုးစားးရင် ရရဲ့သားနဲ့ မင်းက အလျှော့ပေးလို့၊ သူကလည်း သတ္တိမရှိဘဲ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လို့ ... ဒီလိုအဖြစ်တွေ ကြုံလာရတာ” ဟုသာ သူငယ်ချင်းများက မချိတင်ကဲ ရေရွတ်ခဲ့နေကြပါသည်...။
" ငါနင့်ကို အရမ်းချစ်ခဲ့ပါတယ်...။ သူငယ်ချင်းလိုရော. အစ်ကိုလိုရော. ချစ်သူလိုရော အချစ်တွေအားလုံးပုံအောပြီး. ၆ နှစ်လုံးလုံး.ငါ့ဘ၀မှာ ချစ်ရမယ့်သူဟာ.. နင်တစ်ယောက်တည်းပဲလို့.. ယုံကြည်ခဲ့ပြီး. အချစ်ကြီးချစ်ခဲ့တယ်..။ ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်ဝတဲ့တစ်နေ့မှာတော့.. ငါတို့ဘ၀နှစ်ခု ပေါင်းစပ်ကြမှာပဲလို့.. ရိုးရိုးလေးပဲ. ယုံကြည်ထားခဲ့တယ်...။
အခုလိုမျိုး.. . ငါတို့ဘ၀မှာ တတိယလူဝင်လာမယ်လို့.. ငါတစ်ခါမှ မတွေးခဲ့ဖူးသလို... နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေ.. သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးလည်း... ဘယ်လိုမှ မျှော်လင့်မိခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး..."
သူမရဲ့စကားများကို.. သူတိတ်ဆိတ်စွာပဲ. နားထောင်နေခဲ့ပါသည်..။ အမှန်တကယ်တော့ သူ့မှာ ပြန်ပြောစရာ၊ သူမကို နှစ်သိမ့်စရာ စကားလုံးမရှိလောက်အောင်.. ဆို့နင့်ကြေကွဲနေခဲ့လို့သာ ဖြစ်ပါသည်.။ မှားခဲ့သည့်အမှားတစ်ခုအတွက်..ခွင့်လွှတ်ပေးပါဟု တောင်းပန်ရလောက်အောင် သူ့အသက်ထက်မြတ်နိုးခဲ့သည့် ဖြူစင်လွန်းသောချစ်သူကို.. သူ့ဘ၀အမည်းစက်တွေ.. အစွန်းထင်းမခံစေချင်ခဲ့တာကြောင့် ဆုံးရှုံးခြင်းဆိုသည့်အရာကိုသာ သူရွေးချယ်လိုက်တာမဟုတ်လား...။
“အခုတော့ မင်းကသာ လူရိုသေရှင်ရိုသေ ဘွဲ့တစ်ခုတောင် မပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ ဘဝကို ကုန်ဆုံးဖြတ်သန်းနေချိန်မှာ ကောင်မလေးကတော့ နိုင်ငံခြားက ဘွဲ့ဒီဂရီတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာထက် ဆယ်ဆမကသာတဲ့ လစာဝင်ငွေတွေနဲ့ မင်းရဲ့အမြင့်မှာ မင်းနဲ့အဝေးကြီးမှာ ဖြတ်သန်းအောင်မြင်နေပြီ။ မင်းကြည့်လိုက်လေ...ဘဝနှစ်ခု ဘယ်လိုကွာခြားသွားပြီလဲဆိုတာ မင်းကြည့်လိုက်ဦး”
သူငယ်ချင်းများ၊ မိဘဆွေမျိုးများ၏ မခံမရပ်နိုင်ပြောကြသည့် စကားများအတွက် သူ့စိတ်ထဲ အဖြေစကားကတော့ တစ်ခွန်းတည်းသာ။
“ငါကတော့ မိသားစုဘဝတစ်ခုနဲ့ ဘဝကိုအေးအေးလူလူဖြတ်သန်းနေချိန်မှာ ပညာတွေ၊ ဘွဲ့တွေ၊ ငွေကြေးတွေကြားထဲ သူတစ်ယောက်တည်း ပျော်ရွှင်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာ သေချာပါ့မလား”
သို့သော် “အမြင့်ဆုံးထိရောက်အောင် ပျံသန်းမယ်”ဟု အမြဲတဖွဖွရွတ်တတ်သလို သူမရည်ရွယ်ထား သည့် အိပ်မက်တွေအားလုံးကို မဖြစ်မနေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားတတ်သည့် ကောင်မလေး သည် အိပ်မက်တွေကို ထုဆစ်ရင်းက အချိန်တွေ၊ အတွေးတွေမအားမလပ်ဖြစ်နေဆဲဘဝဖြင့် သူ့ကို မေ့နေလောက်ပြီသာ ဖြစ်ပါသည်။။။
♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥♥
စွန်ကလေး အမြင့်ကိုရောက်သွားတိုင်း ငယ်စဉ်ကလေးဘဝက (ဘာမှမသိတော့) ပျော်ခဲ့မိပါသည်။ (တကယ်တော့ သံယောဇဉ်ကြိုး နွမ်းနွမ်းလေးနှင့် လွှတ်တင်ထားသည့် စွန်လွှတ်သူရဲ့အဝေးကို ရောက်မှန်းမသိရောက်သွားတာကို တဖြည်းဖြည်း သိလာရတော့ ... ) လွတ်လပ်စွာ.. ကောင်းကင်ကြီးတစ်နေရာတွင် ပျံဝဲနေမည့်စွန်လေး လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဖြည်လျော့ခဲ့သည့်… သံယောဇဉ်ကြိုးရှည်ရှည်များကိုတော့ သူဘယ်သောအခါမှ .. နှမြောတသနောင်တရမိမည်မဟုတ်ပေ…။
စွန်ကလေးရေ..ပျော်ပါစေ ~~ (၁)
Phyu Lwin February 10, 20160Comments
သူငယ်ချင်းက ထူးထူးခြားခြား သတင်းတစ်ခုပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သာမာန်ပြောဆိုနေကျ စကားတွေကြားထဲ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အမှတ်မထင်ပြောဆိုလာခဲ့ပါသည်။
“အော် ... ဟုတ်လား..။ သူ ဒီမှာ ပြန်နေဖို့ဖြစ်စေ၊ ခဏအလည်လာတာမျိုးပဲဖြစ်စေ ပြန်လာတာဖြစ် မှာပေါ့”
တုန်ခါမှုမဲ့တဲ့ အသံနှင့်အတူ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ သူပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ခြင်းက အတိတ်သည် အတိတ်သာဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခြင်းများလား၊ ကြိုးစားမေ့ဖျောက်နေရခြင်းကို ဟန်ဆောင်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်နေလေမလား ဝေခွဲမရခဲ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်ကာလ...။ အတိအကျပြောရလျှင် လွန်ခဲ့သော လေးနှစ်နှင့် တစ်လကျော်ကာလရဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့တစ်ရက်..။ အဲဒီရက်ရဲ့ ညနေခင်းတစ်ခုမှာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ ‘ပြည်ပထွက်ခွာ’ဆိုသည့် နေရာတစ်ခုတွင် သူမကို လူကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာဆိုလျှင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မည်။ Check In Counter ကိုမသွားခင် Security Check မှာ အိတ်၂လုံးကို မနိုင့်တနိုင်သယ်သွားပြီး စစ်ဆေးပြီးသည်နှင့် နောက်ကို တစ်ချက်မျှလှည့်မကြည့်ဘဲ ကောင်တာဆီသို့သာ သူမ တန်းလျှောက်သွားခဲ့ပါသည်။ ကောင်တာတွင် အိတ်များကို အလေးချိန် ချိန်တော့လည်း ဘေးနားမှာရှိနေသည့် အလုပ်သမားများ၏ အကူအညီကိုမယူဘဲ ကိုယ်တိုင် တင်ချပြုလုပ်နေသည့် သူမကို တော်တော်ပင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးချင်သည့် ပေကပ်ကပ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်အဖြစ် အမြဲကြည့်နေကျအတိုင်း သူကြည့်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါသည်။ ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံး၊ လက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးနှင့် စက်လှေကားဆီ ခေါင်းမော့လျှောက်သွားသည့် သူမသည် လှေကားပေါ်ရောက်ကာမှ သူနှင့် သူမမိသားစုရှိရာဆီ တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ကာ စက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို ဘာခံစားချက်မှမရှိသောမျက်နှာနှင့် လက်ပြသွားခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်..။ မြင်ကွင်းကနေ တဖြည်းဖြည်းကွယ်ပျောက်သွားသည့် သူမကိုကြည့်ရင်း ခွဲခွာရခြင်းဆိုသည့်အသိနှင့် ၀မ်းနည်းမှုများကို မျိုသိပ်နေခဲ့ရသည့် သူကိုယ်တိုင်မှာတော့ မျက်နှာအပျက်ပျက်အယွင်းယွင်းဖြစ်လို့သာ ကျန်နေရစ်ခဲ့ပါသည်။
“ငါ့ကောင်မလေးသွားတော့ အထဲမ၀င်ခင် ငိုလိုက်တာကွာ..။ သူငိုတော့ ငါလဲ မျက်ရည်ကျမိတော့ တာပေါ့..။ သူက မိန်းကလေးဆိုတော့ ငါ့ထက်ပိုခံစားရရှာမှာ..။ သူ့ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက် ကျောင်းတက်မှာမို့လို့သာ သွားခွင့်ပြုလိုက်တာ..။ သူသွားတာနဲ့ သူဝမ်းနည်းပြီး ငိုတာနဲ့တောင် မတန်ဘူး” ဟု သူ့ချစ်သူကောင်မလေးကလည်း ကျောင်းသွားတက်ဖို့ ခဏတာခွဲသွားခြင်းခံရသည့် ဘ၀တူသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောလာခဲ့ပါသည်..။ သွားခါနီး မျက်ရည်တစ်စက်မကျရုံမျှမက သူ့ဘက်ကို တစ်ချက်တောင် လှည့်မကြည့်ခဲ့သည့် သူမကိုတော့ “ဘယ်လို နားလည်ရမှန်းတောင် မသိဘူး၊ မင်းကောင်မလေးက အသည်းနှလုံးရော ရှိရဲ့လားကွာ” ဟုပင် သူငယ်ချင်းက မချိတင်ကဲ ဆက်လက်ရေရွတ်နေခဲ့ပြန်ပါသေးသည်..။
သူငယ်ငယ်က ကစားနည်းတွေအများကြီးထဲတွင် စွန်လွှတ်သည့်ကစားနည်းကို အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ရစ်ဘီးတစ်လုံးကို ရစ်ငင်နေခဲ့ပြီး ကောင်းကင်ကြီး၏ အမြင့်တစ်နေရာတွင် ပျံသန်းနေသည့် စွန်ကလေးကို မြင်တွေ့ခွင့်ရတာကိုပင် သူက ကြည်နူးနေတတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စွန်ကလေးသွားရာနောက် ပြေးလိုက်ရင်း ချိုင့်ထဲမှာ လဲကျ၊ ခလုတ်တိုက်ရင်း ဒဏ်ရာအနာတရတွေ ရခဲ့သော်လည်း အမြှီးလေး တရမ်းရမ်းနှင့် လွင့်ဝဲနေသည့် စွန်ကလေးကိုမြင်ရရုံမျှဖြင့် သူခံစားရသမျှက ကွယ်ပျောက်သွားစမြဲပင်။ အဲဒီအချိန် ကလေးဘ၀တုန်းကတော့ သူနေခဲ့သည့် မြို့သေးသေးလေး၏ မြစ်ကမ်းဘေးနားမြေကွက်လပ်တွင် သူငယ်ချင်းများနှင့် ညနေတိုင်းစွန်လွှတ်ကစားလေ့ရှိခဲ့ကာ အိမ်ပြန်လာတိုင်း သူချစ်သည့်စွန်ကလေးကို ကောင်းကင်ကြီး၏တစ်နေရာတွင် စွန့်လွှတ်ပြီး ပြန်ခဲ့ရတာချည်းပင်ဖြစ်သည်။ သူ့စွန်ကလေးဆုံးရှုံးသွားမည်ကို စိုးရိမ်တတ်သည့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ မြစ်ကမ်းဘေးတစ်လျှောက် စွန်ကို နိမ့်နိမ့်လေး ဆွဲသွားကာ ပျံသန်းစေလေ့ရှိခဲ့သည်မို့ နှစ်ယောက်အတူ ပြန်လာသည့်အချိန်တိုင်း၊ ကလေးလေးနှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က စွန်ကလေး ဆုံးရှုံးသွားသည့်အတွက် ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတတ်သော်လည်း တစ်ယောက်ကတော့ ဘယ်တုန်းကမှ အမြင့်ကိုပျံသန်းခွင့်မပေးခဲ့၍ လက်ထဲမှာ မပျောက်မပျက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည့် စွန်ကလေးကို ကိုင်ဆွဲလျက်သာ ။
“မင်းက အမြင့်ကြီးကို ပျံခိုင်းတာကိုး ။ သူက အဝေးရောက်တော့ မင်းဆီကို ဘယ်ပြန်လာနိုင်တော့ မှာလဲ..။ နောက်တစ်ခါဆို.. ငါ့လိုမျိုး.. နိမ့်နိမ့်လေးပဲပျံခိုင်း.. ။ အဲဒါမှ စွန်လေးကို မင်းမဆုံးရှုံးမှာ..” ဟု သူငယ်ချင်းက အမြဲတမ်းပြောတတ်လေ့ ရှိခဲ့သော်လည်း စွန်ကလေးအမြင့်ကို ရောက်သွားတိုင်း၊ သစ်ပင်တွေ..ဓါတ်တိုင်တွေ..အခြားကလေးများ၏စွန်လေးတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး မိုးကောင်းကင်မှာ လွတ်လပ်စွာပျံဝဲနေတာကိုတွေ့တိုင်း ပျော်တတ်ခဲ့သည့် သူက စွန်ကလေးပိုလွတ်လပ်ဖို့.. စွန်ကြိုးတွေကို.. အမြဲတမ်း ကိုယ်တိုင်သတိမထားမိဘဲ ရစ်ငင်ပေးလေ့ရှိခဲ့သည်သာဖြစ်သည်.။
သူ့လိုပင် စွန်လွှတ်ခြင်းကို.. သဘောကျတတ်သည့်.သူမကတော့.. စွန်ကလေး မိုးကောင်းကင်ကြီးထဲတွင်. အနှောင့်အယှက် ကင်းကင်းနှင့်. ပျံဝဲနေအောင်.. စွန်ကြိုးတွေကို.. သူရစ်ငင်ပေးနေသည့်အချိန်တိုင်း.. ဘေးနားကနေ ကလေးတစ်ယောက်လို .. ပျော်ရွှင်မြူးထူးစွာ. ခုန်ပေါက်အားပေးလေ့ရှိခဲ့သည်.။ သို့သော်လည်း စွန်ကလေးကို ကောင်းကင်ကြီးထဲတွင် တစ်ကိုယ်တည်း စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပြီး.. ကျန်ရစ်ပျံသန်းစေခဲ့သည့်အချိန်တွင်မတော့ သူ့လို ခံစားနှမျောမနေတတ်ဘဲ ကောင်းကင်ကြီးထဲ၌ အနှောင်အဖွဲ့များ မရှိတော့ဘဲ… လွတ်လွတ်လပ်လပ်.. ပျံသန်းသွားနိုင်ပြီဆိုသည့်အတွေးဖြင့်… စွန်ကလေးအတွက်.. ကြံဖန်ဂုဏ်ယူနေတတ်ပြန်ပါသေးသည်.။
သူမရဲ့ ရည်မှန်းချက်အကြီးကြီးတွေကို ပြောပြတတ်သည့်အချိန်တိုင်း၊ သူမမျက်ဝန်း၏ အရောင်တွေ တလက်လက်နှင့် ယုံကြည်ချက်တွေကို.. တွေ့ရလေ့ရှိသည့်အခါတိုင်း… သူ့ရဲ့စွန်ကလေး အဝေးကို ရောက်သွားတော့မှာပါလားဆိုသည့် အတွေးမျိုး သူတွေးခဲ့ဖူးသည်.။
သူသတိမထားဖြစ်သော်လည်း အမှတ်တရနေ့ရက်တိုင်းတွင် ပေးခဲ့သည့်လက်ဆောင်အချို့သည် ကဗျာဆန်ဆန်ပန်းစည်းတွေ၊ သူမချစ်တတ်သည့်အရုပ်သေးသေးလေးတွေ၊ ချောကလက်တွေ ဖြစ်မနေတတ်ဘဲ သူမလေ့လာရန်အတွက် IELTS စာအုပ်တွေ.. စိတ်ခွန်အားဖြည့်ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေ.. ဖြစ်နေတတ်သည်။
ကဗျာစာအုပ်လှလှလေးတွေနေရာတွင် သူမဖတ်ဖို့ နည်းပညာစာအုပ်ထူထူတွေ ဖြစ်နေတတ်ပြန်သည်။ နားထောင်ချင်စရာ အချစ်သီချင်းသံစဉ်ချိုချိုလေးတွေမဟုတ်ဘဲ သူမလေ့ကျင့်ဖို့ အင်္ဂလိပ်စကားပြော အခွေတွေပဲ ပေးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမပိုချစ်လာစေဖို့အတွက် စကားလုံးလှလှလေးတွေနှင့် ကြင်ကြင်နာနာ ပြောရမည့်အစား သူမရဲ့ကြိုးစားမှုများ အရာထင်အောင်မြင်စေဖို့ မချင့်မရဲ အားမနာတမ်းဝေဖန်မှုတွေ ဖြစ်နေတတ်ခဲ့သည်။
အခါတော်တော်များများ၌ သူမ၏ Email-Inbox တွင် ချစ်သည့်အကြောင်း.. လွမ်းသည့်အကြောင်းတွေ.. မဟုတ်ခဲ့ဘဲ…. သူပို့ပေးတတ်သည့် နိုင်ငံတော်တော်များများက.. Scholarship Information တွေ လေ့လာစရာ E-book တွေပဲ.. သူမတွေ့ရတတ်ပါလိမ့်မည်။ သူမ၏ Facebook Timeline တစ်ခုလုံးတွင် သူတင်ထားတတ်သည့် Scholarship Link တွေ၊ သူမလေ့လာနေတတ်သည့် ဘာသာရပ်နှင့် ဆိုင်သော website link များနှင့်သာ ပြည့်နေတတ်ခဲ့သည်။
“ငါ.. ဂျပန်မှာ မဟာဘွဲ့သွားတက်ဖို့ ADB (Asia Development Bank) လို့ခေါ်တဲ့ အာရှဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ်ရဲ့ ပညာသင်ဆုရတယ်..။ နောက်လထဲမှာ တိုကျိုကိုသွားရတော့မယ်..။ ဘာမှတော့ မကြာပါဘူး..။ ၂ နှစ်ပါပဲ..။ ၂ နှစ်အတွင်း သစ္စာရှိရှိ ငါ့ကိုစောင့်နေနော်”
သူမ၏ရည်မှန်းချက်တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ပြည့်ဝသွားပြီဖြစ်သည့်အခိုက် ပျော်ရွှင်တက်ကြွစွာ ပြောနေသည့် သူမကို ငေးကြည့်ရင်း သူပြောချင်သောစကားလုံးများ ဆွံ့အသွားခဲ့ရသည့်အခိုက်အတန့်ပင်ဖြစ်ပါသည်.။ တကယ်ဆို ထိုနေ့က သူပြောချင်သည့်စကားမှာ “လက်ထပ်ပြီး ဘ၀တစ်ခုကို တူတူရင်ဆိုင်ကြရအောင်” ဆိုသည့် စကားစုအစား “မင်းအတွက် ဝမ်းသာလိုက်တာ..။ စိတ်ချလက်ချသာ ပညာသွားသင်ပါ..။ ငါ မင်းကို ဆက်ဆက်စောင့်နေမှာပါ” ဆိုသည့်စကားလုံးများဖြစ်လို့နေခဲ့ခြင်းက သူမအပေါ်ထားရှိသည့် သူ့ရဲ့ အတ္တကင်းမဲ့သော ဖြူစင်သည့် ချစ်ခြင်းတစ်စုံတရာကြောင့်သာ.ဖြစ်ပါသည်.။ ဒီပညာသင်ဆုကိုရရန် သူမ၏ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရမှုများနှင့် သူ့ရဲ့ ဖေးမအားပေးမှုတွေများစွာ ရင်းနှီးခဲ့ရခြင်းပဲ မဟုတ်လား..။